Affey: Dawladda Soomaaliyeed waxaa lagu dhawaaqayaa 30 July 2004.
Danjire Maxamed Cabdi Affey oo ah Safiirka Kenya ay u magacawday Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada isla markaana ka qaybgalay xaflad balaaran oo ay soo diyaariyeen jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi laguna xusayay 1 July ayaa waxaa ii suurta gashay in aan kula xiriiro khadka Taleefanka waxaana aan ka waraystay socdaalkiisa iyo shirka soomaalida ee kenya.
Waxaana uu u dhacay waraysigu sidatan:
Danjire Maxamed Cabdi Affey
Ridwaan: Danjire Affey Shirka dib u heshiisiintu waxaa uu soo socday ku dhowaad labo sano marka hadda halkee ayay maraysaa xaaladiisa?
Affey: Shirku waxaa uu kasoo gudbay dhamaan marxaladihii ugu adkaa ee sadexda waji waxaana hadda lagu guda jiraa qaybsashada baarlamanka oo beel waliba ay gooni uga shirayaan isla markaana aan filayno in mardhow lasoo gaba gabeeyo. Waxaana ay iila muuqartaa in shirka rajadiisu ay aad u wanaagsantahay?
Ridwaan: goorma ayaa idiin qorshaysan in lasoo afjaro shirka dib u heshiisiinta kooxaha soomaaliya ee Nairobi ka socda?
Affey: sida dhamaan IGAD iyo xubnaha beesha caalamka noo qorshaysan waa 30 July ee bishan in dawladda soomaaliyeed ay kasoo baxdo shirka Kenya?
Ridwaan: Sida aanu la socono danjire waxaa shirka ilaa hadda ka maqan maamulka Somaliland arintaas soo dhibaato uma aragtaan?
Affey: walaahi Ridwaan waxaa wax lagu qaybsanayaa beelo soomaaliyeed, dhamaan beelaha soomaaliyeed waxaa ay ka qaybgalayaan shirka dib u heshiisiinta , cidii ka maqanna waxaan isleeyahay waa ay iman doonaan laakiin hadda dhamaan beeluhu way ku wada jiri doonaan dawladda halkan lagu dhisayo.
Ridwaan: Manoo sheegi kartaa tirada ciidamada ah ee soomaaliya IGAD ay u qorshaynayso in la geeyo marka dawladda la dhiso?
Affey: Tirada rasmiga ah kuuma xaqiijin karo laakiin qorshaha aanu ka wada hadalnay anagoo IGAD, UN iyo Midawga Afrika ayaa ah in soomaaliya la geeyo ciidamo nabad ilaalineed waxaana ciidamaas ay xoojinayaan amaanka dawladda iyo hub ururinta soomaaliya.
Ridwaan: ma la kulantay xubnaha baarlamanka ee dalka Canada oo hadda aad ku sugantahay?
Affey: waan la kulmay waxaa kaloo ay ka qaybgaleen xaflad balaaran oo lagu maamuusayay 1 Julay , waxay soo dhoweeyeen oo ay naga balan qaadeen in ay taageerayaan dawladda soomaaliyeed ee shirka ka dhalan doonta haduu ilaahay idmo.
Waad Mahadsantahay Danjire Maxmed Cabdi Affey.